ပင်မှည့်သီးစားရင်ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူး – Focus Myanmar
ပင်မှည့်သီးက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ရာပေါင်းများစွာကတည်းက ကမ္ဘာပါ် မှာရှိခဲ့တဲ့အသီးတစ်မျိုးပေါ့။ ပင်မှည့်သီး က အမျိုးအစားပေါင်း ၅ဝဝ လောက်ကို ရှိနေတာပါ။ အသီးရဲ့ပုံစံက ဂရိတ်ဖရုနဲ့ ဆင်တူပြီး အရည်ရွှမ်းတဲ့အစေ့လေးတွေ အများကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
ပင်မှည့်သီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် နေ့ စဉ်လိုအပ်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်နေတာ ကြောင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကို ကျန်းမာစေပြီး ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာ စေပါတယ်။ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် C ၊ ကယ် လို ရီတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ပင်မှည့် သီး ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုက သရက်သီး၊ ငှက်ပျောသီးတို့ထက် polyphenol ပိုမိုပါ ဝင်နေတာပါ။ သံဓာတ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် တို့ လည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ပင်မှည့်သီးကနေရရှိမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေက
1. အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုများတာကြောင့် ဆီး ချိုသမားတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
2. ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ free radicals တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
3. ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်တာကြောင့် သွေးတိုးရောဂါကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
4. ဗီတာမင်C ၊ကာရိုတင်းတို့ပါဝင်တာ ကြောင့် ကိုယ်ခံအားတိုးတက်အောင် လုပ် ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
5. အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ပိုတက်ဆီ ယမ်နဲ့ ဖောလိတ်ပါဝင်မှုကြောင့် စိတ်ဖိ စီးမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
6. ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်နဲ့ phosphorus နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်လိုမျိုးသတ္တုဓာတ် တွေ ကြွယ်ဝတာကြောင့် အရိုးသိပ်သည်း ဆ ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
7. Bioflavonoids ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာ ကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
8. သံဓာတ်နဲ့ copper ပါဝင်တာကြောင့် သွေးနီဥဆဲလ်တွေ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။
9. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့လည်း ပင်မှည့်သီးကို စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ဖောလိတ်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် သနေÎသားကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
10. ပင်မှည့်သီးမှာ Harman ဒြပ်ပေါင်းပါ ဝင်တာကြောင့် အိပ်မပျော်တဲ့ ဝေဒနာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
11. ဗီတာမင် A ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို စိုပြည်လှပစေပါတယ်။ပင်မှည့်သီးစားသုံးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိခိုက်တာ တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ် နိုင်ပေမဲ့ လူအချို့မှာတော့ ဓာတ်မတည့် မှု ဖြစ်တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ Credit: Kumudra
နေလောင်သွားတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည် ဖြူဝင်းလာစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ